Jimco, Juun 9, 2017 Jimco, Juun 9, 2017 Douglas Karr
Syndication waa hab wax ku ool ah oo loogu talagalay dukaamada internetka si ay si dhakhso leh u kordhiyaan mugga qiimeynta alaabada iyo dib u eegista (dib u eegista) ay muujiyaan. Noocyada, sida caadiga ah marka ugu horeysa ee la soo ururiyo adeegsigan qiimaha leh ee soo saaray (UGC), waxay u hamuun qabaan dukaamada inay ku soo bandhigaan goobahooda eCommerce. Marka lala wadaago faallooyinkooda la-hawlgalayaasha qaybinta, noocyadu waxay ka caawin karaan alaabooyinka inay istaagaan oo ay si fiican u iibiyaan, maaddaama mugga dib-u-eegista sare lagu caddeeyey inay kordhinayaan iibka. Ilaa hadda, isku-xidhka noocaas ah
Sidee Qiimeynta Wax soo Saarka Dukaanku u Saameysaa Ganacsatada AdWords
Khamiis, Maarso 12, 2015 Sabti, Febraayo 4, 2017 Scott Donald
Google ayaa soo saartay aaladda AdWords dabayaaqadii bishii Luulyo si ay uga caawiso dadka wax iibsanaya inay gaaraan go'aanno iibsi oo xog dheeri ah leh Xayeysiiska Liiska Wax soo saarka (PLA) ee Google.com iyo Google Shopping hadda waxay lahaan doonaan qiimeyn wax soo saar ama iibsi Google ah. Ka fikir Amazon oo taasi waa sida saxda ah ee aad arki doonto markaad ka raadineyso alaabada iyo adeegyada Google. Qiimaynta alaabtu waxay adeegsan doontaa nidaamka qiimeynta 5-xidig leh tirinta dib u eegista. Aynu nidhaahno waxaad ku jirtaa suuqa kafeega cusub. Goorma